Aasaaska Iimayllada Waxqabadkoodu Sareeyo | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Aasaaska iimaylada waxqabadka sare leh
Aasaaska iimaylada waxqabadka sare leh
Waxyaabaha hal-abuurka leh waa tiirka ololaha iimaylka ee guuleysta, wadista wadista oo furma, dhagsi, iyo iibsasho. Maqaalkan, waxaan dib u eegi doonaa qaybaha hal-abuurka lagama maarmaanka ah ee ololaha waxqabadka sare leh.
Talaabada ugu horeysa waa template email wax ku ool ah. Qodobbada aasaasiga ah waxaa ka mid ah:
Laydh. Naqshad hal-column ah ayaa ah kuwa ugu fudud ee lagu hagaajin karo aaladaha mobilada.
Qoraal iyo sawirro. Waayo-aragnimadayda, iimayllada ugu fiican waa qiyaastii 60% sawirro iyo 40% qoraal ah.
Cabirka. Ballaca 400 ilaa 600 pixels ayaa si fiican uga dhigaya dhammaan aaladaha. Dhererku wuu kala duwanaan karaa iyadoo lagu salaynayo fariinta, laakiin iimaylada dhaadheer waxay kordhiyaan wakhtiyada rarka.
Fonte. Ku dheji xarfaha caanka ah sida Arial, Calibri, Georgia, Times New Roman, iyo Verdana. Faraha aan la isticmaalin si fiican ugama shaqayn doonaan dhammaan barnaamijyada iimaylka.
size: Ka dhig cabbirka faylka in ka yar 100 KB. Inta yar ee uu le'eg yahay, emaylka ayaa si degdeg ah u soo shubi doona, waxaana sii badanaya suurtogalnimada in qaatahayaashu akhriyaan waxa ku jira.
Shuruudaha sharciyeed. Ku dar qaybta hoose xiriirinta is-diiwaangelinta iyo ciwaanka boostada ee shirkaddaada - Xeerka US CAN-SPAM wuxuu u baahan yahay labadaba.
Guud ahaan Naqshadeynta
Emayllada suuqgeyntu waa inay ahaadaan kuwo fudud, nadiif ah, oo sahlan in la akhriyo.
Ciwaanka, cinwaan-hoosaadka, iyo meel cad caawin habaynta fariinta. Go'doomi baaqa ficilka si aad u soo baxdo.
Noocyada waa in aanay ka yarayn 12 ilaa 14 pixels ee kumbiyuutarrada, 16 pixels ee talefannada casriga ah.
Midabada. Inta yar, ka wanaagsan - aan ka badnayn saddex.
Naqshadu waa inay had iyo jeer taageertaa afarta W:
Yaa iimaylku ka yimid.
Waa maxay sababta ay khusayso qaataha.
Marka qaataha waa in uu tallaabo qaado.
Waxa la sameeyo marka dambe.
Sida cad ee aad u gudbiso afartan walxood, waxa sii badanaya fursadaha beddelka.
Ballaaran Sawiradu way ka balaadhan karaan qaabka (xallinta sare) ka dibna la qiyaaso iyadoo la isticmaalayo sifooyinka sawirka ama CSS.
Qoraalka Alt wuxuu soo bandhigi doonaa marka sawirku aanu soo shubin ama uu xannibo isticmaaluhu. Qoraalka Alt sidaas darteed waa inuu si taxadar leh u qeexaa sawirka si uu uga caawiyo isticmaalayaasha inay fahmaan ujeeddadiisa.
Dad ku dar. Waayo-aragnimadayda, sawirrada ay ku jiraan dadka ayaa ka sarreeya kuwa aan lahayn.
ku haboon Hubi in sawirku uu taageerayo ujeedada iimaylka.
Tusaalahan tusaalaha ah ee ka yimid Shopilicious waxa uu leeyahay saami wanaagsan oo sawiro iyo qoraal ah. Sidoo kale, wicista-ficilka ("Shop Now") ayaa ku dhow meesha ugu sareysa, taasoo siinaysa jihada cad qaataha.
Fiidiyowga iyo GIF-yada
Fiidiyowyada iyo GIF-yada firfircoon waxay dhiirigelin karaan dhagsiinnada. Laakiin dhammaan macaamiisha iimaylka ma taageeraan qulqulka fiidiyowga ee qaabka laftiisa. Tan waxaa ku jira Outlook iyo Gmail. Shaqada ugu fiican ee agagaarka ah ayaa ah in lagu daro sawir leh badhanka ciyaarta oo lagu dahaadhay kaas oo ku xidha fiidyowga mareegaha lagu hayo. (Si kastaba ha ahaatee, qiyaas ahaan kala badh bixiyeyaasha iimaylka waxay taageeraan fiidiyaha HTML5 ee guntan.)
Everlane waxa uu tusayaa badhanka ciyaarta ee korka sawirka ku jira iimaylkan. Riixitaanka badhanka waxay u qaadaysaa isticmaalaha fiidiyaha la hayo.
Dhammaan macaamiisha iimaylka waxay taageeraan GIF-yada firfircoon. Laakin ku hay cabbirka faylka 1 MB ama ka yar.
Dhammaan macaamiisha iimaylka waxay taageeraan GIF-yada firfircoon, sida tusaalahan Starbucks.
Naqshadaynta iimaylka ee ka jawaabaya ayaa si toos ah u habayn doonta jaantuska qalabka qaataha. Hababka kale ee waxtarka leh ee mobilada waxaa ka mid ah:
Badhanka wacitaanka ficilku waa inuu ahaadaa mid weyn oo lagu riixo far (ugu yaraan 44 x 44 pixels oo leh 16-pixel cabbirka ugu yar ee farta) oo u dhow xagga sare sida la taaban karo.
Habaynta tiirka kaliya.
Fogaanta laynka ee ugu yaraan 1.5 jeer ka weyn cabbirka farta si loo abuuro meel cad oo ku filan.
Astaantu waa inay noqotaa dhexda sare ama bidix sare.
Qarsoodinimada dukaamaysiga ayaa kor u qaadi karta beegsiga xayaysiiska macnaha guud
Sida Loo Isticmaalo Tags YouTube: Hagaha Tallaabo-tallaabo